चुनावको मुखमा 'पापको गुरु !'
कृष्णमुरारी भण्डारी बुधवार, कात्तिक २२, २०७४ 21481 पटक पढिएको
नैतिक शिक्षा दिनका लागि आयोजित प्रवचनमा धेरै पहिले सुनेको र अहिलेसम्म पनि मनमा रहिरहेको एउटा कथाबाट आजको आलेख सुरु गरौं । कथा यस प्रकार छ : किसान- तपाईंहरू विद्वान् पण्डित हुनुहुन्छ, त्यसैले मलाई सधैं भनिरहनु हुन्छ, पाप गर्नु हुँदैन । मलाई सिकाइरहनुभएकाले तपाईं मेरो गुरु हुनुभयो । अनि मेरोजस्तै पापको पनि त गुरु होला नि ? पापको गुरु को हो ? मलाई बताइदिनुहोस् न पण्डितजी !पण्डित- किसानको अचम्मको प्रश्न सुनेर पण्डित जिल्लियो । केहीछिन गमेपछि भन्यो, म तिमीलाई यसको जवाफ अलि दिनपछि दिउँला है !
त्यसपछि उसले धेरै पुस्तकहरू पढ्यो, तर पापको गुरु को हो भन्ने पत्तो लगाउन सकेन । किताबमा नभेटेपछि ऊ जसलाई भेटिन्छ, उसैलाई सोध्छु भनेर घरबाट निस्कियो । सहरमा पुगेपछि उसले एउटी वेश्यालाई भेट्यो र सोध्यो, पापको गुरु को होला मलाई बताइदिन सक्छौ ? वेश्या- सक्छु, किन नसक्नु तर म सानु जातकी हुँ पण्डित ! जवाफ पाउन तिमी मसँग मेरो डेरामा जानुपर्छ । पण्डित- त्यसले केही फरक पर्दैन । जाऊँ ।
वेश्या- हेर पण्डित, मेरो बस्ने ठाउँ यही हो । सोफा एउटै छ, आऊ यसैमा मसँग बस । तिमीलाई भोक पनि लाग्यो होला, म भोजन तयार गर्छु । पण्डित अन्कनाएको देखेर वेश्याले भनी, हेर मकहाँ भोजन गर्‍यौ भने पाँच स्वर्ण मुद्रा पनि तिमीलाई दिन्छु । पण्डित- मौन बसे । मनमनै खुसी भएर हिसाब गरे । ओहो के भयो त, खान पनि पाइने, स्वर्ण मुद्रा पनि पाइने । कसैले देखेको छैन क्यारे, के भयो र ? बरु यो त दुवै हातमा लड्डु पो भयो ! उनको अनुहारमा देखिएको खुसीबाट पण्डितको मनमा खेलेका कुरा वेश्याले सहजै अनुमान लगाई ।
वेश्या- खाना बनाएर थालमा हालेर ल्याई छेउमा स्वर्णमुद्राहरूसहित । भनी, पण्डितजी ल खाना खाऊँ ।
पण्डित- कसैले देखेको छैन क्यारे भन्ने सोच्दै आफ्ना सबै आचरण बिर्सिएर खाना मुछ्न थाले । वेश्या- पण्डितले गाँस मुखमा लैजान लागेका के थिए, थाल पूरै आफूतिर तानी । पण्डित- यो के गरेको ? खान लागेको थाल किन तानेकी ?
वेश्या- तिम्रो प्रश्नको जवाफ दिएको ! तिमीले मलाई सोधेका थियौ नि, पापको गुरु को हो, होइन ?
पण्डित- त्यो त हो ।वेश्या- हो, मैले तिमीलाई त्यही जवाफ दिएकी । यहाँ आउनुअघि तिमीले मैले दिएको खाना खान्नथ्यौ । तर मैले पाँच स्वर्ण मुद्रा पनि खानासँगै दिन्छु भन्दा खान्छु भन्यौ । साँच्चै हो कि होइन भनेर खाना बनाएर दिएँ तिमी त सहज खाना मुछ्न थाल्यौ अनि मैले थाल तानेर तिम्रो प्रश्नको जवाफ दिएकी हुँ ।
पण्डित- कसरी जवाफ भयो, खान लागेको थाल तानेर ? मैले कुरो बुझिनँ नगरबधू ! वेश्या- स्वर्ण मुद्राको लोभमा तिमीले पण्डितको आचरण बिस्र्यौ । त्यही जानकारी दिनका लागि थाल तानेकी हुँ । पडित, तिम्रो प्रश्न 'पापको गुरु लोभ हो' भनेर मैले जवाफ दिइसकें । अब हात धोउ र आफ्नो बाटो तताऊ !
लोभी पण्डितलाई वेश्याले उदाहरणसहित जुन जवाफ दिई त्यसले पाखण्डीहरूको दोहोलो काढेको जस्तो लागेर पाठकसमक्ष प्रस्तुत गरेको हुँ । तर यो नैतिक कथा प्रस्तुत गरेर आजको लेखमा भन्न खोजेको कुरा के मात्र हो भने प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावमा देश जसरी हेलिएको छ, पार्टीका नेताले जुन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्, त्यसबारे सानो सवाल उठाउन मात्र खोजिएको हो । विस्तारमा त पण्डितहरूले चिरफार गर्ने नै छन् ।
घोषणापत्रमा दलहरूले गरिब जनताको दु:खको गीत गाएका छन् । दु:ख र अप्ठेरोबारे सहानुभूति जनाउँदै उनीहरूले जिते जादुगरले मरेको मानिसलाई जिउँदो बनाए झैं गरिबीलाई तीन कोस टाढा भगाइदिनेछन् । शिक्षा-स्वास्थ्य नि:शुल्क उपलब्ध गराउनेछन् । हरेक व्यक्तिलाई यसरी रोजगार दिलाउनेछन् कि बेरोजगार उनीहरूले जितेपछि रहने छैन । जलविद्युत् विकासदेखि कृषिको आधुनिकीकरण यसरी गरिने छ कि नेपालको पहिचान विश्वमै विद्युत् र खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशको रूपमा हुनेछ । बाटोघाटो, रेलमार्गदेखि जल यातायात र केवलकारले नपुगिने नेपालको कुनाकन्दरा नै बाँकी रहने छैन । उद्योगधन्धा यसरी फस्टाउने छ कि चीन र भारतका मजदुर यहाँ काम गर्न वर्क परमिट लिएर आउन थाल्नेछन् । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयले विकसित देशलाई उछिन्नेछ ।
हामी वैधानिक चोर, डाँका, हुँडारहरूलाई जनताको सही प्रतिनिधि भनेर आफ्नो अमूल्य मतदान गरिरहेका छौं । यो गलत मात्र होइन, भ्रष्टाचार पनि हो ।
घोषणापत्रका गफ पढिरहँदा र उम्मेदवारका भाषण सुन्दासुन्दै यताउता फर्किएको त उनीहरूबाहेक अरू कोही परिवर्तन भएको देखिनँ । समाज परिवर्तन गराउने कुरा फलाक्दै हिँड्नेहरू स्वयंमा कति परिवर्तन भए ? तर उनीहरूलाई मत दिएर जिताउने मतदाता यसपालि पनि उनीहरूकै पोथ्रा पढेर उनीहरूलाई नै भोट दिन लालायित रहेको पो पाइयो, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका गाउँ र सहरहरूमा डुल्दाफेरि ।
यो के हो ? किन यस्तो गएगुज्रिएको सोच राखेर मतदाता निम्छरा भएका होलान् ? के नीतिकथाको पण्डितजस्तै हाम्रा मतदाताहरू पनि स्वर्णमुद्राको लोभमा परेर आफ्नो आचरण र अधिकार बिर्सिएर जस्तै सोच महिना दिनअघिदेखि नै बनाएका हुन् ? हुन् भने सार्वभौमसत्तासम्पन्न भनिने जनताको यो एकदमै गलत प्रवृत्ति र हचुवा तथा हेलचक्राइँपूर्ण बानी व्यवहार हो । आफ्ना सन्तान भविष्यका कर्णधार अथवा नयाँ पुस्ताप्रतिको गद्दारी र बेइमानी हो । गणेशमानको शब्दमा भन्दा भेडो हो ।
जितेर गएपछि माखो नमार्ने गैरजिम्मेवार र अनैतिक जनप्रतिनिधिलाई जति दोष लगाउँछौं, तीभन्दा हामी मतदाता एक रौंजति पनि कम भ्रष्टाचारी रहेनछौं । छातीमा हात राखेर भन्ने हो भने हाम्रै सन्तानले भविष्यमा ती भ्रष्ट नेतालाई भन्दा तिनलाई पवित्र मत खसालेर अपराध गर्न प्रमाणपत्र दिने हामी मतदातालाई सराप्नेछन् । हामी पनि अपराधीलाई सघाएवापत रौरव नरकमा घाँटीघाँटीसम्म गुहुको पोखरीमा डुबेर आफ्नै सन्तानले बाबुआमा र हजुरबा-हजुरआमाले गुहु खाएर भोट हालेकाले हामीले दु:ख पाउनुपरेको हो भनेर सरापेको टुलुटुलु हेरिरहने छौं ।
यहींनिर दुई महिनाजति अघि अमेरिकाका ब्रिट स्टेफिन्सले न्युयोर्क टाइम्स भन्ने पत्रिकामा लेखेको लेखको सम्झना आयो । उनले भनेका छन्, यस्तै चुनावमा जनताका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका कुरा उठाउनेहरूले नै हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार ध्वस्त बनाइरहेका छन् । तर हामी वैधानिक चोर, डाँका, हुँडारहरूलाई जनताको सही प्रतिनिधि भनेर आफ्नो अमूल्य मतदान गरिरहेका छौं । यो गलत मात्र होइन, भ्रष्टाचार पनि हो ।
हामी किन मत माग्न आउने यी मुसमुन्द्रे ब्वाँसाहरूलाई प्रश्न गर्दैनौं ? के गरिस् तैंले निर्वाचित भएर गएपछि ? के गर्‍यो तेरो पार्टीले, पटकपटक सत्तामा पुगेर ? के भोट माग्न आउनेसँग र त्यसलाई ल्याउने लाउकेसँग प्रश्न गर्न र तिनलाई अलोकप्रिय लाग्ने विचार प्रकट गर्न हामी मतदाता किन हच्किने ? किन खुला दिमागले हामीले आफ्ना कुरा वामपन्थी होस् कि दक्षिणपन्थी गठबन्धनका उम्मेदवारसँग नराख्ने ?
न्युयोर्क टाइम्सका ती लेखक पण्डित ब्रिट स्टेफिन्सले पश्चिमी विद्वत् समाजमा हरेकले आफूलाई आलोचनात्मक रूपमा हेर्ने दाबी गर्दै आफ्नो लेखमा भनेका छन्- सुकरात होमरसँग झगडा गर्दथे । एरिस्टोटल प्लेटोसँग विद्रोह नै गर्थे । लक, हब्स र रूसोसँग असहमति प्रकट गरिरहन्थे । नित्से त हरेकसँग झगडै गर्थे । विद्वान् विट्गेन्स्टिन त आफैंसँग झगडा गरिरहन्थे । उनले औंलो ठड्याउँदै सचेत गराएका पनि छन्, तर यी झगडा कहिले पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि हुँदैनथे । कुनै निश्चित राजनीतिक वा सिद्धान्त र व्यवहारविरुद्ध नै हुन्थ्यो । आश्चर्यलाग्दो कुरा के भने, उनले जोड दिँदै भने- हाम्रा पण्डितहरूका ती झगडा केही दशक र कहिले त शताब्दीसम्मै चलिरहन्थे । विरोध जनाउने विद्वान्को निधन भइसके पनि उसले उठाएकोे सवालले निरन्तरता पाउँथ्यो !
अझ महत्वपूर्ण र रोचक कुरा त के भने ती झगडा गलतफहमी भएर गरिएका हुन्नथे । सारभूत रूपमा वैचारिक प्रतिपक्षका विचारहरू गहन रूपमा पढेर मात्र त्यसमाथि निर्मम प्रहार गरिन्थ्यो । त्यसैले कसैसँग असहमत हुन वैचारिक प्रतिपक्षका विचारहरू गहन र व्यापक रूपमा पढेर, त्यसबारे टिपोटहरू बनाउँदै सचेत भएर मात्र असहमत हुनेले आफ्ना समानान्तर विचार अगाडि बढाउँथ्यो । त्यसैले कसैसँग असहमत हुन सर्वप्रथम उसका कुरा राम्ररी बुझ्नुपर्छ । वामपन्थी घोषणापत्रले गरेका गफ र दक्षिणपन्थी गठबन्धनको तथ्यांक मिथ्यांकको चाङले मतदाताको मनलाई तान्न सक्दैन ।
तिनीभित्रका मरमसलाबारे पण्डितले स्वर्णमुद्राको लोभमा आफ्ना आचरण छोडेजसरी होइन कि ब्रिट स्टेफिन्सले जसरी गहन अध्ययन, गम्भीर श्रवण, सूक्ष्म नजर लगाएर असहमत भएका विचारलाई हेर्नु, बुझ्नु र पढ्नुपर्छ । यस्ता कुरा गर्दा नैतिकवान् हुन पनि जरुरी छ । शंकाको सुविधा जहिले पनि प्रस्तोतालाई दिनुपर्छ किनभने उसको उद्देश्यप्रति सहानुभूति राखेर मात्र उठेको चुरोको आलोचनामा निर्ममता अपनाउनुपर्छ ।
तर प्रमुख दलहरूको जसरी भए पनि चुनाव जित्न गरेको हडबडीलाई देख्दा लाग्छ, उनीहरूको नियत नै पहिलाजस्तै मतदातालाई गुमराहमा पारेर चुनाव जित्नु हो । यिनलाई यही निर्वाचनमा मतदाताले सशक्त भएर जवाफ नदिने हो भने आउँदो कार्यकाल पनि ठग्ने र लुट्ने र झुक्याउने छन् । त्यसैले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा महत्वपूर्ण भूमिका पत्रकारिता जगत्ले निर्वाह गर्नैपर्छ । यसका लागि पत्रकारले सबैभन्दा पहिला दलको झोले हुन छोड्नैपर्छ । दलीय बर्को ओढेर गरिएको व्यावसायिक पत्रकारिता होइन ।
पत्रकारिता अरू बन्दव्यापार वा व्यवसाय जस्तो होइन । न यो सामान ढुवानी गर्ने ट्रक ड्राइभरी हो, न त तात्तातो मोमो बेच्ने व्यापार नै । मुलुक भनेको भेट्न आउनेलाई अस्तुको अंश हालेर पकाइएको काट्टो र त्यो खुवाउने किरियापुत्री होइन ! यही कटु सत्य पत्रकारले निर्वाचनका बेला मतदातासमक्ष पस्किनैपर्छ किनभने सरकार यतिबेला सुशासनको माखौल उडाउने षड्यन्त्रमा लहसिएको छ । निर्वाचन आयोगलाईसम्म धम्क्याइरहेको छ ।
मंगलवार, चैत ६, २०७४ राजनीति, विश्वास र अविश्वास
मंगलवार, चैत ६, २०७४ माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) टिप्स
ल्यान्डमार्क होटलमा सामूहिक 'बलात्कार': पक्राउ परे मुख्य आरोपी 2614
न्युरो अस्पतालमा तिघ्राको अप्रेसन गर्दा बिरामीको मृत्यु 4986
श्रममन्त्री भन्छन्ः सिन्डिकेट लाउनेको दिनगन्ती सुरु भयो 2698
एक लाख घुससहित पक्राउ परेका दुई प्रहरी जवान निलम्बित 813